]Igwe na-arụ osisi omenala, ndị na-ebu ihe eji arụ ụlọ | Ụlọ ọrụ Shangrui
]Igwe osisi ShangRui
Dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa na-emepụta na ịmepụta ígwè ọrụ na-abụghị ọkọlọtọ.
Shangrui Machinery specializing na mmepụta nke a dịgasị iche iche nke osisi na osisi siri ike ngwá ụlọ mmepụta ngwá (woodworking ígwè, ngwá ụlọ na-eme ka ngwá), dị ka dị iche iche mkpa nke ndị ahịa chepụta na-emepụta na-abụghị ọkọlọtọ ígwè (dị ka pịa igwe).
Machinery Shangrui bụ igwe eji arụ osisi ọgbara ọhụrụ&ngwá ụlọ na-eme ngwá ọrụ Enterprise nke integrates imewe, mmepe, mmepụta, echichi, tupu ire ere, ire na mgbe-sales ọrụ.
Na elu-edu otu elite, magburu onwe mmepụta ngwá na ule ngwá. Nyochaa ngwaahịa, usoro njikwa mma na-emeziwanye nke ọma.
Echiche nke ihe ọhụrụ na pragmatism na-agba Shangrui Machinery ngwaahịa ume ka ọ nọgide na-achọ ahịa ahịa, nkà na ụzụ mmepe dị elu, ọrụ zuru oke mgbe ahịa na-ere ahịa, ma mepụta àgwà nke ngwaahịa ngwaahịa Shangrui.
customizde 650T ọkụ pịa igwe emeputa
]Na nleta nke abụọ na osisi ahụ, General Tao na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ kpebiri nrụgide nke ọkụ ọkụ 650T, okpomọkụ kachasị elu nke mgbasa ozi nwere ike iru ogo 180. Mazị Tao dị ezigbo mma banyere igwe anyị ebe ọ nwara 400T pịa na ụlọ ọrụ anyị n'oge ikpeazụ. Mana n'ihi ntiwapụ ahụ, ọ nweghị ohere iji kparịta nkọwa nke igwe. Mgbe nleta a gasịrị, anyị nabatara ya nke ọma ma gosi ya akụkụ igwe na igwe ndị a na-emepụta na ụlọ ọrụ ahụ. Site na akụkụ nke ọ bụla na efere ígwè, a na-egosi ọnụahịa ahụ nke ọma ma na-enye ihe ngosi anụ ahụ. Ndị ọrụ nka na-eso ya ụbọchị dum ka ya na ya kparịta ụka, ma nye ya nhọrọ kachasị ọnụ ahịa. Ọbụlagodi agba agba igwe, ụgbọ njem, nrụnye na nbudata nyekwara aka inye atụmatụ dị iche iche.
Shangrui Machinery Co., Ltd dị na Shunde, Guangdong Province
Machinery Shangrui bụ igwe eji arụ osisi ọgbara ọhụrụ&ngwá ụlọ na-eme ngwá ọrụ (dị ka igwe pịa) ụlọ ọrụ nke na-ejikọta imewe, mmepe, mmepụta, ntinye, ire ere, ire ere na ọrụ ire ere. Na elu-edu otu elite, magburu onwe mmepụta ngwá na ule ngwá. Nyochaa ngwaahịa, usoro njikwa mma na-emeziwanye nke ọma.
Shangrui Machinery ọkachamara na mmepụta nke dị iche iche nke osisi na osisi siri ike mmepụta ngwá ọrụ (dị ka pịa igwe), dị ka dị iche iche mkpa nke ndị ahịa chepụta na-abụghị ọkọlọtọ ígwè.
Ọ BỤRỤ na Ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, detara anyị akwụkwọ
]A raara onwe ya nye inye ndị ọrụ nka nka na ọmarịcha ọrụ.